Difenoconazole inonyanya kushandiswa pakupfapfaidza pamiti yemichero, uye kumwaya pamberi kana padanho rekutanga rechirwere kune kwakanyanya kudzivirira uye kudzora maitiro. Zvirwere zveCitrus zvinosaswa kanokwana ka2 mune yega yega yemwaka wekukura nguva yekukura, zhizha kupfura kukura nguva, mudiki f ...
ne admin pane 21-03-08
Difenoconazole ndeye yakakwira-inoshanda, yakachengeteka, yakaderera-huturu, yakafara-yakasarudzika fungicide, iyo inogona kutorwa nemiti uye ine yakasimba osmotic mhedzisiro. Icho zvakare chigadzirwa chinopisa pakati pefungicides. Nekuparadza synthesis yesero rusvingo rwehutachiona, inopindira ne ...
Mumakore maviri apfuura, varimi vazhinji vemiriwo vakadyara mhando dzisingabatirwe nehutachiona kuitira kudzivirira kuitika kwehutachiona hwemadomasi. Nekudaro, mhando iyi yerudzi ine chinhu chimwe chakafanana, ndiko kuti, iri shoma inopokana nezvimwe zvirwere. Panguva imwecheteyo, apo varimi vemiriwo vanowanzo ...
Diethyl aminoethyl hexanoate (DA-6) iri yakakura-inosimudzira yekukura chirimwa ine yakawanda mabasa eaxin, gibberellin uye cytokinin. Iyo inonyungudika mumvura uye zvisikwa zvinogadziriswa senge ethanol, ketone, chloroform, nezvimwewo Inogadzikana mukuchengetedza mukamuri tembiricha, yakagadzikana pasi peyakarerekera uye ...
Kuitira kudzikisira kukanganisa kwakakonzerwa netupukanana tupukanana kuzvirimwa, isu takagadzira huwandu hwakawanda hwezvipembenene zvakasiyana. Iyo mashandiro ekuita kweakasiyana zvipembenene akafanana, saka isu tinosarudza sei iwo anonyatso kukodzera zvirimwa zvedu? Nhasi tichataura nezve maviri zvipukanana ...